U qaabee smartwatch-ka Shiinaha si aad ugu xalliso dhibaatada ogeysiisyada | Androidsis
Eder Ferreño | | Shiinaha Shiinaha, Smartwatch, Tababarada
Haddii saacado yar uun ka hor aan kuu soo bandhigay Dib-u-eegis Iradish X9 Y6 ah, sida a Kalluumeysiga Apple Watch ee ku habboon Android iyo iOS iyo in aan ku heli karno wax kayar 30 Euro, haddaba waa marki sixitaanka lagu waafajinayo ogeysiisyada, marka waxaan ku tusayaa sida jooji dhibaatada ogeysiisyada a Smartwatches Shiinaha taasi waxay kuxirantahay barnaamijka ogeysiiska Bluetooth.
Xal u helista dhibaatada ogeysiisyada ee Smartwatches-ka Shiinaha oo sida caadiga ah noogu muuqda xiriiriyaha leh taleefannada casriga ah ee leh nooca loo yaqaan 'Android Lollipop', waa ansax u ah dhammaan moodooyinka iyo noocyada Shiinaha ee Smartwatches in la isticmaalo barnaamijka ogeysiiska Bluetooth, kaas oo siinaya dhibaatooyin badan oo aad u badan oo aan isku dhafanayn ogeysiisyada la helay.
1 Sida loo dejiyo smartwatch-ka Shiinaha loona hagaajiyo dhibaatada ogeysiisyada
2 Sida loo sameeyo smartwatch-ka Shiinaha
3 Sida loogu xiro smartwatch Shiineys ah Android
4 Barnaamijyada casriga smartwatch ee Shiinaha
5 Ogeysiiska BT
Sida loo dejiyo smartwatch-ka Shiinaha loona hagaajiyo dhibaatada ogeysiisyada
Fiidiyowga ku lifaaqan cinwaanka maqaalkan waxaan ku tusayaa adiga talaabo talaabo xalka dhibaatada dhibaatada ogeysiisyada ee Smartwatches-ka Shiinaha. Xal u fudud sida ka tirtirka ogeysiinta Bluetooth iyo rakibidda Smartwear, mid ka mid ah codsiyada loogu talagalay Shiinaha 'Smartwatch' oo gebi ahaanba laga heli karo Google Play Store adoo gujinaya xiriirka aan ka tagayo hoosta.
Iyadoo la rakibayo qalabka casriga ah iyo rakibaadda ogeysiinta Bluetooth waa nala sixi doonaa dhammaan dhibaatooyinka isku-dhafan ee ogeysiinta dhammaan noocyada iyo moodooyinka smartwatches-ka Shiinaha ee isticmaalay ogeysiiska Bluetooth.
Smartwear Waa mid ka mid ah codsiyada ugu fudud ee smartwatch-ka Shiinaha loo adeegsado loona qaabeeyo, sida fudud ama ka badan ogeysiiska Bluetooth iyo taas oo aan ku gaari doonno iswaafajinta dhammaan ogeysiisyada naga gaaraya taleefanka casriga ah ee ku xiran Smartwatch, in kasta oo laga soo qaatay barnaamijyada u gaarka ah, waxaan sidoo kale awoodi doonnaa inaan ku kala shaandheynno ogeysiisyada codsiyada si aan u helno oo keliya ogeysiiska codsiyada na xiiseynaya.
In kasta oo shaashadahan laga soo qaaday Google Play Store, haddana waxaad arkaysaa in codsigu u muuqdo af Shiine, xaqiiqadu waa taas Waxaa si buuxda loogu tarjumay Ingiriisi waana mid si buuxda u shaqeynaysa oo aad u fudud in la fahmo.
Sida loo sameeyo smartwatch-ka Shiinaha
Markii aan iibsano smartinocino cino, mid ka mid ah faahfaahinta ugu horreysa taas waa inaan xisaabta ku darsannaa waa nidaamka aad ku shaqeysid. Xaalado badan, magacyadu waxay ku sharraxayaan Wear OS, nidaamka hawlgalka ee ay soo saartay Google ee qalabkan. Haddii ay arintu sidan tahay, markaa hawshu runtii way fududahay, maaddaama qaabeynta aysan waqti dheer nagu qaadan doonin. Si tan loo sameeyo, waxaan u baahan doonaa inaan ku isticmaalno codsiga Wear OS taleefanka.
Marka barnaamijka la soo dejiyo, waa inaan ku shidnaa Bluetooth labada qalab iyo barnaamijka Wear OS guji bilowga qaabeynta. Ka dib waxaan u baahan doonaa oo kaliya inaan raacno talaabooyinka lagu muujiyay shaashadda, si labada aaladood ay isugu xirmaan. Farriin ayaa ka soo muuqan doonta shaashadda oo leh Xiriir ama xiriir, si aan u ogaano inay tan horey u dhacday.
Marka la isku xiro, waanu u habeyn karnaa smartwatch-kan Si fudud. Codsiga Wear OS waxaan ku sameyn karnaa tan dhib la'aan. Waxaan u habeyn doonnaa howlaha aan dooneyno inaan ku isticmaalno saacadda, si ay ugu habboon tahay
Sida loogu xiro smartwatch Shiineys ah Android
Waagii hore, haddii ay dhacdo in la yiraahdo smartwatch-ka Shiinaha ma lahayn Android Wear ama Wear OS, barnaamijyada kale waa in la isticmaalo. Nasiib darrose, in badan oo ka mid ah ayaa laga saaray dukaanka, sida Smart Wear ama MediaTek Smart Device. Qaybta wanaagsan ayaa ah inay jiraan codsi kale oo noo oggolaanaya inaan fulino hawshan, si aan ugu xirno saacadda taleefanka Android, marka lagu daro joojinta dhibaatooyinka ogeysiinta.
Waxay ku saabsan tahay Daawashada Droid Phone, kaas oo loo heli karay Android muddo. Codsigan ayaa naga caawinaya inaan ku xirno smartwatch-kaaga nidaamka hawlgalka ee Android telefoonka si aan awood ugu yeelano inaan ka helno ogeysiisyada dalabyadaada, maamulida loo maqalka muusikada, u dirno feylasha taleefanka illaa smartwatch iyo kuwo kaloo badan. Si tan loo sameeyo, waa inaan soo dejisanaa barnaamijka saacadaha iyo barnaamijka taleefanka:
Daawo Telefoonka Droid
Developer: Software Lumatic
Daawo Kaaliyaha Droid
Marka labada codsi la soo dejiyo, waa inaan furnaa barnaamijka taleefanka. Waxay na tusaysaa talaabooyinka la raaco si telefoonka loogu xidho smartwatch-ka Shiinaha. Marka talaabooyin yar ayaan horey uheli doonnaa labadan aalad oo qaab isku mid ah loogu iswaafajinayo, taas oo noo ogolaan doonta inaan saacadda sida ugu badan uga faa'iideysanno.
Barnaamijyada casriga smartwatch ee Shiinaha
Waxaa jira barnaamijyo badan oo waxtar u yeelan kara isticmaaleyaasha haysta smartwatch-ka Shiinaha, si ay awood ugu yeeshaan inay uga faa'iideystaan. Qaar ka mid ah barnaamijyada ugu xiisaha badan ayaa ah:
Codsi dhammaystiran oo loogu talagalay dadka isticmaala ee orodka u baxa. Tan iyo markii loo soo bandhigay inay tahay barnaamijkaaga socodsiinta iyo jimicsiga, taas oo aad ugu mahadcelineyso inaad haysatid rikoodh hagaagsan oo xakameyn ah waqti kasta oo jimicsigaaga ah, oo leh dhammaan faahfaahinta muhiimadda u leh arrintan. Marka waxaad kuheli kartaa raad raac jimicsi oo wanaagsan mahadnaqa barnaamijkan.
App-ka otomaatiga hawsha caanka ah, taas oo naga caawinaysa inaan abaabulno geedi socodyo badan oo taleefan ah ama maalin-maalin ah. Intaa waxaa dheer, waxaan sidoo kale ku isticmaali karnaa smartwatch, xitaa adeegsi dhameystiran xitaa mar walba. Marka waa codsi hubaal waxtar u yeelan kara adeegsadayaal badan.
Codsiga farriinta caanka ah ee la yaqaan wuxuu la midoobayaa smartwatch, si aan u awoodi karno inaan aragno dhammaan fariimaha aan ka helno saacadda waqti kasta. Sidaa darteed, marnaba kama waayi doontid wax ogeysiin ah gudaheeda, gaar ahaan haddii aad u baxday inaad sameyso isboorti wakhti kasta.
Codsigan waa mid caadi ka ah smartwatches-ka Shiinaha, laakiin taasi xaalado badan waxay sababi kartaa dhibaatooyin, sida ogeysiisyada. Sidaa darteed, talo soo jeedinta ayaa ah in laga saaro saacadda. Gaar ahaan maxaa yeelay taa beddelkeeda waxaan adeegsan karnaa barnaamijyo kale oo si fiican u shaqeyn doona, sida Droid Watch, oo na siisa shaqooyin isku mid ah, marka lagu daro qabashada howlo dheeri ah, oo aan wax dhibaato ah u keeni doonin howlgalka saacadda.
Hadda waxaad kala soo bixi kartaa ogeysiiska Bluetooth Google Play, halka wali laga heli karo. In kasta oo qiimeynta isticmaaleyaashu ay inta badan taban yihiin, taas oo caddeynaysa inay tahay barnaamij aan si weyn u qancin oo aan u siinaynin waxqabadka la filayo. Way fiican tahay inaad iska ilaaliso inaad ku isticmaasho smartwatch-kaaga Shiinaha.
Waxaan rajeyneynaa in casharkaan yar kadib aad awoodday samee smartwatch-ka Shiinaha iyo dhibaatooyinka ogeysiisyada waa la xaliyay. Haddii aad heshay qaab kale oo lagu hagaajiyo cayayaanka dhibta leh, nala soo socodsii sida aad ugu sameysay faallooyinka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Shiinaha Shiinaha » Sida loo xaliyo dhibaatada ogeysiisyada ee Smartwatches-ka Shiinaha
Waxaad tahay dhacdo !!! Abkaasi waa mid fiican !!
Waad ku mahadsantahay wadaagista ??
Dhamaan ugu fiican?
Ku jawaab Benzema
Macallin rakib runtuna waa inay tahay barnaamijka kaliya ee aan ku helay ogeysiis, laakiin dhibaatadu waxay tahay inaan ka helo kaliya ogeysiinta nidaamka taleefanka, ogeysiisna kama helin barnaamijyada la qaabeeyey wax walbana waan isku dayey, ma sameeyo ogow sida loo sameeyo. tilmaan yar?
Telefoon noocee ah ayaad haysaa Wax la mid ah ayaa igu dhaca aniga oo wata moto g 2014
Saaxiib dhibaato ayaan qabaa barnaamijku ma aqoonsana saacadda: / maxaan sameyn karaa
Ku jawaab Roberto Encinas
hello, ma xallin kartaa?
Ku jawaab jart2
Waxaan hayaa KSIX Smart Watch, waxaan ku xirayaa bluetooh, waxay shaqeysaa shanta daqiiqo ee ugu horeysa saacad BT ahna waa la waayey, mobiilkeygu waa Samsung GALAXY Ace model GT558391 Android version 2.3.6.
Waxaan soo iibsaday smartwatch Shiine ah, waxay ku xirneyd Bluetooth-ka LG LG kaamil ah laakiin isuma aysan dhigin Waan aqriyay ku dhowaad dhammaan talooyinkii ka soo baxay, waxaan isticmaalay ku dhowaad dhammaan barnaamijyadii iyo waxba.
Markii aan fiirinayay goobaha qolka, waxaan haystay "goobta". Waan daaray oo waan xaliyay dhibaatada. Isla markiiba waa lala xiriiray waxayna kaliya adeegsanayeen barnaamijka ay soo-jeediyaha saacaddu ku taliyay.
Waxaan rajeynayaa in khibradeyda ay kuu adeegi doonto.
Ku jawaab Elisabeth
Waa salaaman tahay, aad ayaan ugu faraxsanahay in is-afgaradku wax badan i caawiyey laakiin waxaan jeclaan lahaa inaan beddelo wajiga saacadda Shiinaha, moodelku waa W3, suurtagal ma noqonaysaa, ma i caawin kartaa? Mahadsanid, jawaabtaada waan sugi doonaa
Intale inta yar ayaan helayaa oo qalad ayey igu tuuraysaa ama waxay kala furaysaa kaliya kumbuyuutarkayga waa s5
Waxaan haystaa saacad a8 ah waqtigana ogeysiisyada waa kuwo wanaagsan, dhibaatadaydu waxay timaadaa markay tahay u habeynteeda, sababtoo ah ma jirto qaab wax loogu dhigo samrtwatch
Kuma shaqeyso Smartwatch-ka GT08S oo wata taleefanka LG G3 oo leh lollipop-ka Android 5.0.
Waxaan hayaa One Touch Pop C7 oo waliba maalmo yar ayuu si fiican u shaqeeyaa ka dibna shaqada ayuu joojiyaa oo mar labaad ayuu goayaa.
Galab wanaagsan, waxay kalashaqeyneysaa kalabar s5, iyo levovo A2010, waxay kuhadashaa oo kaliya cod laakiin ma muujineyso wax
Jawaab Abel Sanabria
Waad ku mahadsantahay soo galinta. Iima ogola in aan rakibo, waxay i siisaa qalad 505 ah oo aan la rakibi karin, maxaan sameyn karaa? Mahadsanid
Ka tirtiro barnaamijka kale ee aad ku haysato taleefankaaga oo ku xiran smartwatch oo rakib SmartWear.
u8 leh s7 si fiican ayuu u shaqeeyay! Mahadsanid!
Ku jawaab HeM
Waxaan haystaa S7 mana xiriiri karo, waa labo-labo marna kala-goynayaa, qof ma i caawin karaa?
Jawaab Arturo Xavier
Hal saac oo Shiine ah iyo mid Shiine ah saacaddiiba, waxay na siiyeen annaga oo labalaabnay
malag aragon ortega dijo
Waxaan hayaa GR08 ogeysiisyadana looma habeynin
Ku jawaab malag aragon ortega
Waad salaaman tahay, ma i caawin kartaa, waxaan ka imid Venezuela, waxaan hayaa nooc U8 ah waxaanan ku dhejiyaa kiniiniga android ama aaladaha kale ee android iyo barnaamijka SmartWear ma aqoonsan karo aaladda U8. Telefoonku wuxuu kuxiran yahay Bluetooth laakiin barnaamijka waxaan kahelayaa inuusan dhahin guuldareysta "SmartDevice connect Fail" Waxaan isku dayay dhamaan barnaamijyada waxna majiraan.
Jawaab Luis Barrios
Waan ku faraxsanahay maxaa yeelay codsigu si fiican ayuu iigu shaqeeyaa. Sony Xperia C4
Jawaab Carolina Soto Silva
wanaagsan, waxaan haystaa no1 g3 iyo fundo dalabka, waxa ku saabsan imaatinka ogeysiisyada wax dhib ah kuma qabo. Dhibaatadu waxay timaaddaa markaan isku dayo inaan ku akhriyo saacadda casriga ah mana garanayo haddii aan wax badan weydiinayo, laakiin waxaan aqriyay ra'yiyo sheegaya in aad akhrisan karto waxa ku dhaca iyo kuwa kale. Xaqiiqdu waxay tahay inaan arko wixii ogeysiis ah ee aan haysto, laakiin iima oggolaaneyso inaan akhriyo farriimaha laftooda. Qof kasta oo ii heli kara fiilo?
Nabade Josemi. Dhibaato isku mid ah ayaan ku qabaa isla smartwatch. Waxaan arkaa tusaale ahaan inaan haysto 7 farriimood oo WhatsApp ah oo 3 khad oo kala duwan ah. SUV si kastaba uma awoodo inaan akhriyo midkoodna.
Ma ku guuleysatay inaad hagaajiso?
Isla waxbaa igu dhaca aniga sidoo kale, kaliya ogeysiis mana aqrin karo. Waxaan ka aqriyay bog in saacadaha qaar aan loo isticmaalin in wax lagu akhriyo kaliya si loo ogeysiiyo 🙁
APP hadda lama heli karo 🙁
Waad salaaman tihiin, aad baad ugu mahadsan tihiin macluumaadka, laakiin fiidiyowga lama heli karo. 🙁
Waad salaaman tahay Luis. Waxaan si sax ah u haystaa dhibaato la mid ah isla smartwatch. Ma ku guuleysatay inaad xalliso? Waan arki karaa inaan haysto tusaale ahaan 7 farriimo 3 wada sheekaysi, laakiin ma awoodo inaan akhriyo xitaa hal ...
Ma jiraa nooc ka mid ah qalabka casriga ee loogu talagalay iPhone-ka?
Sideen ku heli karaa whatsapp-ka GTO8 oo wata iPhone?
Ku jawaab Anto
Waad salaaman tahay saaxiib, waxaan arkay su'aashaada ku saabsan in uu jiray barnaamij lagu xiro GT08 iyo iPhone, waxaan qabaa shaki la mid ah haddii aad ogtahay sida aan kuugu mahadcelinayo
Jawaab Deiby Cobo
Waad salaaman tihiin, galab wanaagsan, waxaan haystaa dharka boqorka ee kw18 waxaanan jeclaan lahaa inaan ku daro wejiyada saacadaha fadlan ma i caawin kartaan?
Waad salaaman tahay, waxaan haystaa iPhone 6s, waa maxay barnaamijyada aan isticmaalo?
Waad salaaman tahay ..! waad ku mahadsantahay sharaxaaddaada. Shaki ayaan qabaa. Labaduba waxay u muuqdaan kuwo kuxiran taleefanka iyo saacada, hase yeeshe barnaamijka ma heli karo saacadda. Waa U8.
Waxaan jeclaan lahaa jawaab waxtar leh haddii ay suurogal tahay. Mahadsanid
Jawaab José Ricardo
fiid wanaagsan. marka hore iga raali noqo hadii aanan su'aasha ku weydiin meesha saxda ah (laakiin ma garanayo meel aan dhigo) Waxaan u soo iibiyay gabadhayda smartwatch-ka Shiinaha oo ay ii muuqatay inaysan lahayn Isbaanish, waxay noqon lahayd suurto gal ah in lagu daro si uun. Mahadsanid .
Andrea qoorta dijo
Waad salaaman tihiin, waxaan haystaa A1 oo kaliya codka whatsapp ayaa imanaya ee ma ahan fariinta, waxaan u baahanahay xal
Ku jawaab Cuello andrea
Isla waxaas oo kale ayaa igu dhaca Andrea, ma xallisay, ii sheeg?
Jawaab Lois David
Smartwash-kayga maahan mid casri ah markaan markaan iskaan qr code ii diro si aan ugu ciyaaro dukaanka laakiin iima oggolaan doono inaan soo dejiyo ogeysiiska bt asalka ah Ma iga caawin kartaa inaad aragto haddii aad ii oggolaato inaan u qaabeeyo? Aad baad ugu mahadsantahay horay.
Jawaab Guillermo Santiago
Waad salaaman tihiin, maanan xalin, emailkaygu waa andrea_itaty @ hotmail. com, waxaan rabaa caawimaad
Jawaab Andrea Cuello
hello waxaan ubaahanahay caawinaad, waxaan hayaa sonyw smartwatch 3 barnaamijyada qaarna waxay i siisaa qalad is dulsaaran isla saacadaas fadlan caawi
Subax wanaagsan, ma aqaano inay noqon doonto meesha saxda ah ee su'aashan la weydiiyo. Waxaan u iibsaday gabadhayda smartwach Shiinaha ah iyaduna ma keento luuqada Isbaanishka. ma jirtaa wax suurtagal ah oo lagu daro? Waxaan rajeynayaa inaad i caawin karto. Mahadsanid.
Waxaan hayaa su'aal, waxaan haystaa j7 waxaanan leeyahay gt08 smartwatch mana aqrinkaro ogeysiinta whatsapp, sikastaba hadii aan aqrin karo kuwa iigu imaado farriinta facebook, xal ma jiraa? Waxaan hayaa codsi rakibmay oo la yimid lambarka qr saacadda
Weli waxaan shaki iiga jiraa No.1 G3 iyo whatsapp si gooni gooni ah
Waxaan arki karaa oo keliya ogeysiinta ah inaan fariimo ku haysto whatsapp laakiin ma aqrin karo. Xal kasta?
Waad ogtahay KW88 Smartwatch, ma ii sheegi kartaa haddii ay wanaagsan tahay sida loogu rinjiyeeyay xayeysiinta sheyga.
Waad salaaman tihiin 2 maalmood ka hor waxaan soo iibsaday U8 smartwatch Waxaanan leeyahay dhibaato ah inay ogaysiisyadu ii yimaadaan oo xitaa waan aqrin karaa laakiin saacadu kama dhawaqayso ama kama gariirto markay yimaadaan mana garanayo waxa aan sameeyo haddii ay caawin karaan aniga, emailkaygu waa sebastian.galaz93@gmail.com
Jawaab Sebastian Andres Galaz Ponce
Waad salaaman tahay, waxaan iibsaday dz09 laakiin iima oggolaaneyso inaan rakibo whatsapp ama facebook, sidoo kale biraawsarku ma sameeyo, wuxuu horey u haystaa jibbaar si uu shaqsiyan uga shaqeeyo taleefanka gacanta, laakiin wuxuu ii soo dirayaa biraawsarka si aan u rakibo laakiin wuu ku siinayaa qalad, qof ma i caawin karaa?
Ku jawaab ester
Waad salaaman tahay, galab wanaagsan, fadlan ma i caawin kartaa? Waxaan hayaa iPhone-ka iyo saacada dz09 oo kaliya waxay u shaqaysaa wicitaanada, fariina way soo gaadhay, laakiin wax ogaysiis ah lama arki karo, waxaanan ka akhriyay dhinacyo kala duwan in hadii ay awoodaan, ugu yaraan akhriyaan fariin qoraal ah iyo Whats App, waxaan rajaynayaa caawimaad, mahadsanid salaan
Ma helayo ogeysiisyada wax. Telefoonadu way isoo gaadhayaan laakiin whatsAppsku ima gaadho. Waxaan horeyba u tijaabiyay arjigaas waxbadan oo intaas ka badanna ma shaqeeyaan. Waxay bixineysaa calaamado muujinaya inuu isku xiran yahay laakiin whatsapp-yada ma yimaadaan: \_
Waxaan haystaa gt08 wicitaanadiina way imaanayaan laakiin ogeysiisyadu kuma saabsana wax ama wahtsapp ama wax uun. Waxaan horeyba u tijaabiyay barnaamijkan iyo kuwa kaloo badan laakiin midkoodna aniga iima shaqeeyo, waxaan horay u arkay casharro badan, horay ayaan u qabtay wax walba iyo ogeysiisyada anigoon imanin. Fadlan caawi. Mahadsanid.
Isku day Mediatek SmartDevice. Wax weyn ayaan qabanayaa.
Waan aqrin karaa wathsapp
Waxaan soo iibsaday saacad caqli gal ah mana aqrinkaro fariimaha adeerkey uu yahay Shiine. Sideen kuugu mahadceliyaa. WAAN U BAAHAY CAAWIMO
WAAN KUUGU TAGAY MAIL.
Waxaan haystaa saacad, no.1 g6 oo saacadda iyo taleefankayga gacanta kuma xidhi karo, oo waxaan leeyahay mooto g4 oo lagu daray
Waxaan ubaahanahay macallin leh saacada kw88 fadlan ka caawi emailkeygu inuu yahay dranthonymbl@gmail.com
Jawaab Anthony M Benavides L
Waad salaaman tihiin. Waxaan haystaa gt08 iyo android 6.0.1 Waxaan rakibay ku dhowaad dhammaan apk-ga mana shaqeynayo. Xaaladaha qaarkood way i ogeysiisaa laakiin iima ogola inaan aqriyo whatsapp-ka. Caawi mahadsanid
Waad salaaman tahay, waxaan haystaa k88h ka dib laba maalmood oo qumman ka dib ... markaan furo, maalinta saddexaad waxay ku sii jirtaa shaashadda isku xidhka. ..and ilaa maanta…. Qof ma ku dhacday? you Ma taqaanaa sida dib loogu celiyo. ..waxay kaliya leedahay chive-ka saacada ee kadhigaya ...
Waxaan leeyahay mid isku mid ah oo isla wax igu dhaca
Ku jawaab Cruz
QOF AYUU KU XIRI KARAA IPhone ????
Dz09-kayga uma keenayo inuu ka badalo luuqada Ingriiska iyo Isbaanishka, maxaan sameeyaa
barnaamij kasta oo loogu talagalay rejjo-caqliyeed oo ku habboon android 7.0?
Ku jawaab cleo
Carlos taaj dijo
Waxaan haystaa Smart Watch q18 laakiin kamaradu waxay muujineysaa sawirka oo foorara. Ma aqaan sida loo xaliyo?
Ku jawaab Carlos corona
Waxaan iibsaday Smartwartch, waxaanan dul saaray BTNotification sifiican ayeyna iigu shaqaysaa aniga ma garanayo cida masuulka ka ah boggan, waan hubaa inaysan danaynayn, waxaan arkay faallooyin kamana jawaabin mid keliya.Maxaad waxyaalahan u qabanaysaa, oo aadan u caawinaynin, Ma waxaad ku samayn lahayd lacag? awood u yeeshay inay dhaqaajiso internetka. U dir dhoofinta xiriirada saacadda, kuna adeegso mobiilka ka go'ay BT?. Wixii su'aalo ah, waan ka jawaabi doonaa Mahadsanid.
Ku jawaab dchacon
Waad salaaman tahay, waxaan isku dayay inaan rakibo dhowr barnaamij oo xiriirada, wicitaanada iyo ogeysiisyada wey fiican yihiin laakiin ma arki karo fariimaha ka imanaya wassaaska. Ma i caawin kartaa. Waxaan hayaa Bt2 U8
Waxaan hada iibsaday saacad caqli gal ah n smart1 S9 laakiin motorolakeyga G3 android 6 ogeysiisyada ah ma shaqeeyaan. Waxaan isku dayay samsung leh android v. 4.2 iyo haa way shaqaysaa
Taasi miyay ku dhacday cid kale? xagee waxbadan ka ogaan karaa….
Hols Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado sida aan u arko wasap in smartwach leh SIM. Iyada oo loo marayo Bluetooth waan ku sameyn karaa laakiin kuma sameyn karo kaarka sim. Waa Shiine ... a DAM G3 Mahadsanid
Kaliya waxaan ku guuleystey inaan qaabeeyo smartwatch-kayga Shiinaha markaan dib u eegay 200 oo bog oo midkoodna aniga ii shaqeyn doonin. Waxaan si fudud u helay ikhtiyaarka Settings-> Ogeysiinta BT -> google ka daawashada saacadda. Halkaas, lambar QR ayaa ka muuqday shaashadda saacadda oo waxaan ku baarey codsi QR code ah oo aan ka soo dejiyey google play. Markaan sidaas samaynayo, waxaan naftayda u dirayaa cinwaanka saxda ah ee google play ee ogeysiiska BT, oo ah nooca ka dhigay saacaddaasi inay shaqeyso 100%. waa wax weyn Waxaan rajeynayaa inay ku caawin doonto.
ps: taleefankayga gacanta waa nooca LG Bello double chip 2015 u = smartwatch-na iima sheegayo wax lambar ah ama wax ah. Marka anigu garan maayo noocaaga ama qaabkaaga: V
Ku jawaab Maurito
Iima shaqeyso aniga wax barnaamij ah, saacaddu waa lemfo lf1 iyo moobilku waa oneplus3.
Waan ka xumahay waxaan aqrinayay faallooyinkaaga isla markaana waxaan haystaa dhibaato isku mid ah, waxaan haystaa u8 smartwatch iyo Moto G4 oo wata android 7.0 waana ku xidhi karaa bluetooth, laakiin waxaan horeyba isugu dayay dhamaan codsiyada ka yimid ogeysiiska Bt (dhamaan noocyadiisa) Smart Watch, Smart Watch caawiye, Mediatek SmartDevice, Smart Wear. Kuwani waa codsiyada aan isku dayay oo aan waxba ahayn, dhammaantood, waxaan helayaa qalad, qaar ka mid ah codsiyada sida ku xiran laakiin markii ogeysiisku ku yimaado taleefanka gacanta, codsigu wuxuu calaamadeeyaa qalad wuxuuna u xirmayaa si lama filaan ah.
Maxaad ku talinaysaa.
Hadda ku xir Smart Watch taleefan kale oo wata android 5.0 lollipop iyo barnaamijka ogeysiiska Bt (midka ay smart watch codsato) oo si fiican isugu xira conne
Jawaab Erick Vazquez
Galab wanaagsan Francisco, waxaan soo iibsaday Kingwear kw88 waxaanan haystaa dhibaatooyin xaga isku xidhka saacadayda iyo qoraalkayga Samsung galaxy 4. Waxaan raacay casharkaaga fiidiyowga ah, laakiin kuma lammaanaynkaro iyaga arjiga dharka ee Android ee aan aqoonsanayn saacaddayda, horeyba waan waxaa lagu rakibay Daawadaydii hore, Sony smartwatch 3, codsiga xirashada Android waana ogahay, mana heli karo kw88 inuu ka soo muuqdo qoraalkayga si aan isugu xiro. Ma u heli laheyd qaab kale oo aad isku xirto?
Aad iyo aad baad u mahadsantahay iyo salaan, anigu waxaan ahay qof kaa raacsan kanaalkaaga YouTube-ka.
Ku jawaab D. Mérida
Haye, waxaan ka imid Panama, waxaan joojiyay boggaaga weyn, dhibaato ayaan qabaa waxaanan rabaa inaan ogaado haddii aad i caawin karto waxaan haystaa saacad manbo 2 ah oo ka socota shirkadda nafaqada laakiin waxaan ka iibsaday Shiinaha hadda dhibaato ayaan ku qabaa App-ka iyo anigu ma aanan helin mid u dhigma, oo aan soo dejisanno Maxay shirkaddu siisaa waxna ma iga caawin kartid mahadsanid
Iima oggolaan doonto inaan soo dejiyo arjiga oo aan ka gudbo lambarka, ayuu ii sheegayaa, sidoo kale walxaha lama helin
Jawaab Jose silva
Waxaan haystaa dz09 smartwatch dhawaan waxaan dul dhigay kaar mobiil ah mana helayo internetka oo aan ku soo dejisto whatsapp, facebook iyo twitter
Ku jawaab pelayo
Waad salaaman tahay, waxaan iibsaday DZ09 waxaanan isku dayay dhamaan codsiyada aan ogahay inaan awood u leeyahay inaan akhriyo qoraalka whatsapp maxaa yeelay waxay iiga digayaan ogaysiinta iyo cida dirta laakiin qoraalka wuu banaan yahay. Waan fahamsanahay in smartwatch-kaas Haa waad arki kartaa qoraalka ogeysiisyada, runtiina qaar. Video aan arkay. Midkeyga midna waxaan ku hayaa nooca nasabka OS ee Android lagu rakibay. Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado haddii ay jiraan wax xal ah oo lagu xallin karo arrinta. Mahadsanid
Waad salaaman tihiin, waxaan rajeynayaa inaad i caawin kartaan, waxaan heystaa saacada dz09 iyo Moto g5plus, waan soo dajiyey arjiga wax walbana wey fiicnaayeen laakiin markii codsiyada la rakibey (codsiyada aan ku haysto taleefanka horey ayey u soo muuqdeen si ogeysiintu ii soo gaarto ), saacaddu waxay umuuqataa inay go'antahay, taasi waa, waxay kuxirantahay bluetooth-ga oo meelaha taleefanka ay ka muuqdaan laakiin kuma jiraan barnaamijka, sideen ku xallin karaa?
Ku jawaab RebecaChambers
Dhibaato ayaan ku qabaa U8, markaan luqadda u beddelo Isbaanish maalinta taariikhu had iyo jeer u muuqato Isniinta, maalmaha waa la dhaafaa lambarka taarikhduna wuu fiicanyahay laakiin maalintu weli waa Isniinta, Ingiriisiga taariikhdu si fiican ayey ugu shaqeysaa aniga iyo haddii isbeddelo. I CAAWI !!!!!!!
Su'aashaydu waxay tahay inaan dib u soo nooleeyo ogeysiisyada laakiin haddii aan dib u soo nooleeyo wicitaanada, waxaan ku qaadan karaa oo kaliya saacadda, ma ahan taleefanka ...
Waxaan haystaa dz09 laakiin way igu dhegsan tahay wax badan waana inaan ka saaraa batteriga si dib loogu bilaabo, waxa aan ogaaday waa in batteriga uu buuqay oo uu leeyahay xiriir been ah.
Miyuu jiraa qof og haddii xirmooyinku ay saameyn ku yeeshaan inay burburaan?
Waad salaaman tahay… !!
Ma aqaano haddii qof iga caawin karo my p70 smartwatch, waxaan u bartay isticmaalista 'WHATSAPP PLUS' ee loogu talagalay mawduucyada iyo waxaas oo dhan, laakiin saacaddaydu ma hesho farriimaha waxaas ah, waa inay noqotaa asalka WhatsApp-ka inuu ahaado awoodaan inay helaan ogeysiisyo.
Ma jiraa qof og app ama wax ii oggolaada inaan helo waxa ku jira WHATSAPP PLUS?
Ku jawaab Yaniré
Moto Z4 wuxuu si rasmi ah ula shaqeynayaa Snapdragon 675 iyo 6,4 "OLED shaashad
Waxaan horey u ogaanay taariikhda soo bandhigida ee Huawei Mate 30 Lite